Shina: Mibitsika Ny Nitànana Azy Vonjimaika Tany Am-ponja · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Mey 2017 5:59 GMT
Ny Alahady 19 Jolay 2009, Beifeng, bilaogera avy ao Guangzhou, niainga handehandeha niaraka tamin'ny namany ho an-tendrombohitra Baiyun. Nitafy akanjobà nisy soratra avy amin'ny gazety Xinhua tamin'ny 1946 ny sasany tamin'izy ireo , izay nivaky hoe : “Zavadoza eny rehetra eny no ho ateraky ny rafi-pitondrana fehezin'antoko tokana（一黨獨裁，遍地是災)”. Io dia tenifanevan'ny Antoko Kaominista nanoherana ny Kuomingtang, ilay antoko fahiny teo amin'ny fitondràna. Polisy enina no nisambotra sy naka am-bavany ilay andrian-tanora, ary nitohy tany amin'ny tobin'ny pilisy ny fakàna am-bavany. Ora valo no naharetan'ilay “dite” [fomba fitenin'ny Shinoa hamaritana ny fakàna am-bavany ataon'ny polisy io] ary nampitain'i Beifeng ara-potoana tao amin'ny sehatra fanoratana bilaogy kiritika Twitter. Ity ny dika natao avy amin'ireo hafatra nalefany [ amin'ny teny Shinoa, toy ny rohy rehetra tanisaina ato]
Alain'ny polisy enina am-bavany ireo olona sasantsasany nitafy akanjobà misy ny tenifanevan'ilay gazety tranainy Xinhua. Handeha hananika ny tendrombohitra Baiyun ry zareo.
Ilay polisy mitondra ny laharam-pamantarana 018356 no tena mavitrika be.
Tian'ny polisy ho entina any amin'ny tobin'ny polisy ry zareo, saingy tsy mety mandeha. Mihenjana ny raharaha.
Samy mandrakitra anaty lahatsary ny andaniny sy ny ankilany, avy eo nangatahan'ny polisy izahay hamafa ny sary azonay.
Ny tenifaneva nisoratra tamin'ny akanjobà dia nivaky hoe : ” Zavadoza eny rehetra eny no ho ateraky ny rafi-pitondrana fehezin'antoko tokana”
Amin'izao fotoana izao, asaina daholo izahay ho any amin'ny kaomisariàn-ny polisy ao Baiyun. Azonareo atao ny miantso mangataka vaovao misimisy.
Ny tsy maintsy hanamarinana ny mombamomba anay no antony naroso hitondràna anay. Ao amin'ny Làlana 805 Guangyuen Chong no misy ilay kaomisarià ao Baiyun.
Tsy nitafy ilay akanjobà aho. Fa tonga tany fotsiny hanao ilay fihanihana.
Nentina tany amin'ny kaomisarià ny sivy taminay. Navela irery tao aminà efitrano iray malalaka. Indraindray misy polisy mandalo eo am-baravarana. Azo antoka fa eo ampiandrasana ireo polisy avy any an-tanàndehibe ry zareo. Mifananihany izahay.
Mbola mitorevaka ato amin'ny kaomisarià. Misy polisy manao fitafy sivily miditra ary manontany anay raha vonona ny hanoratra ny anaranay izahay. Avy be ny orana ao ivelany ao.
Mivory ireo polisy akama, tsy misy afa-tsy iray no mijanona miambina anay. Tsy hitanay izay atao. Misy namana iray mitanisa andalana avy ao amin'ny baiboly. Ny sasany matory.
Nisy namana iray teo vao afaka nitsoaka tao amin'ny kaomisarià teo amin'ny varavarambe. Hahaha, mahatsikaiky ity
Amin'izao fotoana izao, nakatona ny varavaramben'ny kaomisarià eto Baiyun. Ahatsiarovako ilay ohabolana hoe : « Vantany vao lasa nandositra ny ondry, tsy tara loatra izao mba hanasiana fanamboarana ny efitrano». Mahatsikaiky
Miha-henjana ny raharaha fa efa betsaka izao ny polisy ato. Tian-dry zareo hotazonina hatramin'ny sakafo hariva izahay. Nangataka tamin'izy ireo izahay hanome antony iray itazonany anay.
Amin'izao fotoana izao, mipetraka eo amin'ny tohatra fidirana ato amin'ny kaomisarià daholo izahay valo, afaka mijanona ireo mpandeha an-tongotra, mijery sy maka sary anay
Nisy polisy iray mitafy sivily mitondra anay ho any amin'ny efitrano iray fivoriana ao amin'ny rihana faharoa. Te-hahita anay ny manamboninahitra iray. Hatreto aloha tsy misy dingana noraisina na iray aza
Mandray an-tsoratra ry zareo izao.
Ny anton'ity fakàna am-bavany noraisina an-tsoratra ity dia : fanakorontanana filaminambahoaka
20 minitra aho izay no niala tao amin'ny kaomisarià. Ora valo no nijanonako tao. Tsy tokony haninona ireo hafa. Hanome vaovao momba azy ireo aho atsy aoriana kely. Fa i Yeh Du tsy maintsy nijanona “nisotro dite” (miatrika fakàna am-bavany) ao amin'ny mpitandro filaminana.
Tsy maintsy nisolo akanjo ny sasany ary namela ilay akanjobà tao amin'ny kaomisarià. Nangataka tamin'izy ireo aho hanome rosia anay raha tiany ny hitazona ireo akanjobà. Nolavin-dry zareo izany. Taorian'ny fifampiraharahàna, niova akanjobà aho saingy nentiko nody nanaraka ahy ilay iray. Tsy maintsy nitondra iray hafa aho. Notolorako vola ry zareo ho an'ireo akanjo vaovao, fa nolaviny. Nanontaniako ry zareo raha afaka mandeha miboridana aho, nolavin-dry zareo. Raha ny marina, nivaky toy izao ny soratra tamin'ilay akanjobà teny amiko: « Revolisiona mpivarotena », miaraka amin'ny sarin'i Lénine sy ny fanondroadalany
Io no voalohany ho ahy niainana “fotoana fisotroana dite”. Tena tsy nampoiziko mihitsy
Tao anatin'ny tatitra an-tsoratra nataon'izy ireo, nangatahako ny hanoratany ery amin'ny farany hoe : “Amin'ny maha-mpizahatany tany an-tendrombohitr'i Baiyun, amin'ny maha-olompirenen'ity firenena ity, dia maneho ny alaheloko aho noho ny nitazonan'ny polisy ahy nandritry ny ora enina mahery nefa tsy nandika lalàna na iray aza. Tiako raha mba ho afaka hanaja ny olompirenena tsirairay ny firenena, ary tsy hiseho ao anatiny intsony ireo tranga tahaka izao”.
Voalohany aloha dia ry zareo no nangataka ahy hiova fitafy ary dia nangatahako ry zareo hanome rosia ahy. Polisy iray no namaly ahy hoe nopotehan-dry zareo ireo zavatra ampiasaina hampielezana hevitra. Avy eo ry zareo nitondra hety ary nangataka anay hamotika ireo akanjobà. Mbola nitaky rosia ihany aho. Tezitra ny polisy iray, fa nambarako azy hoe tsy manana kakay aminy manokana aho. Avy eo naka hevitra taminà manamboninahitra amboniny ry zareo ary dia azoko natao ny nitazona ny akanjobà-ko.
Nanontany ahy izay antony itakiako rosia ry zareo, ary novaliako fa tiako hiverenana ho alaina ny akanjobà-ko.
Azo eritreretina ho tsy nahita antony mitombina ry zareo, ka izany no antony tsy nakàny ny telefaona finday teny aminay sy namelàny ny iray taminay ho afaka nandositra. Nivory nandritry ny ora roa ry zareo, ary avy eo dia nanoratsoratra fanontaniana. Nila naka ny hevitry ny amboniny ry zareo vao tonga tamin'io. Nambarako azy ireo fa tsy hanao afa-tsy ny hiteraka fahafaham-baràka ho azy ireo izao rehetra izao.
Efa tafody any aminy izao i Yeh Du. Tafody an-trano tsara daholo tsy nisy naninona izahay valo.
Hatreto amin'ity tantara ity, tsy mazava tsara ireo bitsika nalefa, nampian'i Beifeng antsipirihany bebe kokoa tao amin'ny bilaoginy :
Tamin'ny 14h40 ny hafatra voalohany no nosoratana, ny 19 jolay. Tamin'ny 15h15 izahay no tonga tao amin'ny kaomisarià. Tamin'ny 18h00 no nanomboka ny fakàna ambavany. Valo izahay no tao ary nalaina am-bavany nitsitokantokana avy. Tamin'ny 21h no vita ny ahy. Satria aho nisisika ny hahazo mitondra mody ireo fitafiako, efa tamin'ny 22h55 aho vao afaka tao.